Format Factory 2013 Full Version FREE Download ~ mgkhainghtoo
ကျွန်တော်အခုတင်ပေးမှာက Format Factory 2013 Full Version လေးပါပဲ။ သူရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ
ကတော့အများကြီးပါပဲ။ အရင်တုန်းက ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကို ဘယ်လိုတည်းဖြတ်တယ် ၊ ဘယ်လိုချုံ့တယ်
ဆိုတာပုံနှင့်တကွရှင်းပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုနောက်ထပ်လည်း သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုများပြား
တာကြောင့် နောက်ထပ်ဘာတွေလုပ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတာ ပြောပြပါ့မယ်။ Flash song သီချင်းတွေကို
လည်း MP3 လိုသလို ချုံ့ လို့ရပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေကိုလည်း ဘယ်လို Format မျိုးလိုချင်လဲ ရပါတယ်။
ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း MP4/ 3GP/ MPG/ AVI/ WMV/ FLV/ SWF, MP3/ အစရှိသည်ဖြင့် ကြိုက်သလို
ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ဆိုလည်း ရပါသေးတယ်။ အခွေထဲကနေသီချင်းတွေထုတ်မလား ၊
တစ်ခါတည်း အခွေထဲသီချင်းတွေကို MP3 အဖြစ်တန်းထုတ်မလား ။ ဆက်နေတဲ့ ဗီဒီယို DVD အခွေ
တွေကို အပိုင်းပိုင်း ပြန်ဖြတ်ထုတ်မလား ၊ iSO အခွေဖြင့် ၀င်ဒိုးအခွေတွေထုတ်မလား ၊ အခွေတွေ
ဖြတ်မလား ၊ ဆက်မလား ? မျိုးစုံတဲ့ဆော့စ်ဝဲကောင်းတစ်ခုပါ။ အကြံပေးချင်တာကတော့ စက်တိုင်းဆောင်ထားသင့်တယ်ဆိုတာပါပဲ။
ထပ်ပြောလို့မကုန်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်ချက်တွေများပြလှလို့ ကိုယ်တိုင်ပဲ ဆန်းကြည့်လိုက်ပါ။
“Format Factory” Features
All popular video, audio, picture formats converting.
The possibility to change the size of multimedia files.
For pictures, zooming, rotation, and label support.
Rip DVD to feature.
MP4/WMV/FLV/MPEG opportunity to convert formats files to MP3 format.
PNG, BMP, JPG, stamp printing feature support.